Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha iyo Maamulka Gobalka Banaadir oo Kulan soo dhaweyn ah u sameeyay ciyaartoyda qurbajoogta | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha iyo Maamulka Gobalka Banaadir oo Kulan soo dhaweyn...
Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha iyo Maamulka Gobalka Banaadir oo Kulan soo dhaweyn ah u sameeyay ciyaartoyda qurbajoogta
Muqdisho (SNTV) Wasaaradda Dhalinayarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Banaadir ayaa xalay Muqdisho kulan soo dhawayn ah ugu sameeyey ciyaartoyda qurbajoogta ah oo todobaadkan dalka ku sugnaa.
Kulankaas waxaa ka qeybgalay Wasiirro ka tirsan Xukuumadda, Madaxda Xiriirka kubadda cagta iyo Mas’uuliyiin kale, waxaana Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Eng Yariisow uu sheegay in ay u diyaarsan yihiin ku dhiiri galinta Qurnbajoogta inay dalkooda ku soo laabtaan.
Wasiirka Dhalinayarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in dhalinayarada ciyaartoyda ah ee Yurub iyo Amerika ka kala yimid ay fursad u tahay horumarka Sportiga dalka.
Kulamo is dhexgal ayay Garoonka Koonis Stadium kula yeesheen Kooxdan Qurba Joogta ah Naadiyadda kala duwan ee dalka ka dhisan, waxaana ciyaarahaasi kasoo qeyb galay Shacab kala duwan oo bogaadiyay dhalinyarada Qurba joogta ah ee dalkooda hooyo jecel inay kusoo laabtaan.
Previous articleWasiiradda Arrimaha Dibeda Jabuuti iyo Yemen oo ka wada hadlay Xiriirka Labada Dal
Next articleQaramada Midoobay oo xusaya maanta sanad-guuradooda 73-aad